Galaxy S7 na LG G5 enweghị ike ịwụnye ngwa na MicroSD | Akụkọ akụrụngwa
Galaxy S7 / Edge na LG G5 enweghị ike ịwụnye ngwa na kaadị MicroSD
Mgbe Samsung webatara Galaxy S6 ya afọ gara aga, ọ bụghị obere nkatọ a natara maka iwepu abụọ n'ime isi ihe na-atọ ụtọ nke usoro gara aga: ihe onwunwe nke nyere ya nguzo mmiri na mkpochapụ oghere maka kaadị SD. Ọ bụ ya mere n’afọ a ha ji laghachi ma tinye isi ihe abụọ na Galaxy S7. Ama ndị ọzọ kachasị mma nke ewepụtara na MWC na Barcelona bụ LG G5, ha abụọ nwere ike iji a microSD kaadị iji gbasaa ebe nchekwa nke ngwaọrụ ahụ, ma jiri nuances.
Na aga na nsụgharị nke gam akporo, na SD kaadị naanị ike ga-eji na-azọpụta data, ma na biakwa obibia nke Android 6.0 Marshmallow enwere ike iji nchekwa niile dị ka ngọngọ, yabụ sistemụ a adịghị iche na ebe nchekwa ekwentị na ebe nchekwa SD kaadị. N'ezie, ọ nweghị ụzọ ikewapụ ha ma enwere ike iji ya wụnye ngwa. Mana ozi oma a adighi ka odi na Galaxy S7, Galaxy S7 Edge na LG G5.
1 The Galaxy S7, Galaxy S7 Edge na LG G5 jiri usoro faịlụ ochie
2 Ebumnuche nke ụlọ ọrụ abụọ a bụ iji zere ọgba aghara
The Galaxy S7, Galaxy S7 Edge na LG G5 jiri usoro faịlụ ochie
Samsung na LG kpebiri idebe sistemụ ochie, nke pụtara na enweghị ike itinye ngwa na kaadị MicroSD. N'ezie, dị ka oge niile, enwere ike iji ya iji chekwaa egwu, vidiyo, foto na ụdị akwụkwọ ndị ọzọ. Nsogbu a na-emetụta ngwa ma ọ nwere ike ịdị njọ karịa ma ọ bụ dabere na ojiji nke onye ọrụ nke ọnụ: ọ bụrụ na arụnyere ngwa dị arọ, dị ka egwuregwu dị mma, kaadị MicroSD agaghị arụ ọrụ ma a ga-eji ebe nchekwa ahụ. nke ekwentị.
Samsung ihe mere eji usoro ochie bụ na usoro ohuru na-agbagwoju anya. Na gam akporo 6.0 Marshmallow, enwere kaadi MicroSD site na ngwaọrụ enwere ike iji ya. Dịka akụkụ nke sistemụ na iji nwekwuo nchekwa, data ezoro ezo. Nke a kwesịrị ịbụ ihe dị mma, mana ihu ala bụ na enweghị ike iwepu kaadị ahụ kpamkpam, ebe ọ bụ na enweghị ike iji ya na ngwaọrụ mkpanaaka ma ọ bụ kọmputa ọzọ. Ọ ga-arụ ọrụ naanị na ngwaọrụ edepụtara ya, yabụ na ọ baghị uru ozugbo ọpụpụ. LG ekwughi okwu ọ bụla, mana ihe kpatara ya nwere ike ịbụ nke Samsung.
Ebumnuche nke ụlọ ọrụ abụọ a bụ iji zere ọgba aghara
A na-ejikwa ndị jiri ụdị kaadị ndị a wepụ ha na ngwaọrụ jiri ha na kọmputa ọzọ, ya mere ihe niile yiri ka ọ na-egosi na Samsung na LG chọrọ ịnọgide na-eme omume a ma kpebie ịhapụ ọrụ gam akporo ọhụrụ iji nọgide na-eji usoro ochie.
Iji usoro ochie eme ihe ga-abụ ihe na-adịghị mgbagwoju anya, mana ọ nwere ike ịbụ nsogbu nye ụfọdụ ndị ọrụ. Ma Galaxy S7, na Galaxy S7 Edge na LG G5 na-abata na a 32GB n'ime ebe nchekwa (ma ọ dịkarịa ala n'ọtụtụ ahịa). Samsung ọnụ na-anabata kaadị ruo 200GB, ebe LG G5 na-anabata kaadị ruo 2TB. Anyị enweghị ike ikwu na ọ pere mpe, mana nchekwa ahụ niile lara n'iyi ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ịwụnye ọtụtụ na / ma ọ bụ ngwa dị arọ.
Na mgbakwunye, ekwenyere na, site na iwepu ohere nke sistemụ ji, site na ndị ọrụ nchekwa 32GB naanị ihe dị ka 23GB ga-adị. N'ụzọ ezi uche dị na, nke a ga-ezuru ọtụtụ ndị ọrụ (amaara m ikpe nke ha nwere naanị 4GB ma ọ bụ 5GB), mana "ndị egwuregwu" ga-ewere ihe a niile. Ọtụtụ egwuregwu nwere akụkọ na eserese kachasị mma nwere ibu dị n'etiti 1GB na 2GB yana site na ịwụnye ole na ole, anyị nwere ike ịpụ ohere iji wụnye ngwa ndị ọzọ. Nwee ya, na nke kachasị njọ ị nwere ike iwepụ egwuregwu ọ bụla na-agaghị eji oge ụfọdụ.
Mkpebi Samsung na LG ga-emebi atụmatụ gị ịzụta otu ọkọlọtọ ọhụrụ ha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Galaxy S7 / Edge na LG G5 enweghị ike ịwụnye ngwa na kaadị MicroSD
Samsung na LG kpebiri nke ọma. Ikwaga ngwa dị arọ sd enwere ọtụtụ ngwa a ma ama maka ogologo oge. N'okwu m ejiri m link2sd. O doro anya na ebule nke ngwaọrụ enweghị mmasị na m maka ngwa a.
Zaghachi Marco Argandoña
Ọ dị m ka ọ dị nke ọma maka elekere abụọ, ebe ọ bụ na nsogbu ọzọ a na-akọwabeghị bụ na dabere na klaasị nke sd kaadị ọ ga-abụ ọsịsọ ma ọ bụ nwayọ nwayọ mgbe ị na-agụ ma na-ede ozi ahụ. Imirikiti ndị mmadụ na-etinye kaadị ebe nchekwa 2 (nke dị ọnụ ala) na nsonaazụ na ekwentị na-ewe ogologo oge iji mepee egwuregwu ma ọ bụ ngwa arụnyere na kaadị. N'ụzọ dị otú a, ha na-ahụ na ekwentị na-aga ngwa ngwa.
15 Ndị mmeri Oscar bụ ndị mbụ n'ọnọdụ ha
Xiaomi Mi5 bụ onye ọrụ